Ao amin’ny sekolin’i Kristy
“Hanome saina anao sy hampianatra anao izy làlan-kalehanao Aho; hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao Aho”. Sal. 32:8
Izay mikatsaka mafy tokoa mba hahazo fahendrena amin’ny sekolin’ny olombelona dia tokony hahatsiaro fa misy sekoly hafa maniry azy mba ho mpianatra ao. I Krsity no ilay mampianatra lehibe indrindra tsy mbola hitan’izao tontolo izao, nitondra fahalalana mivantana avy any an-danitra ho an’ny olona (...).
Tsy mba mahazo diploma izany mihintsy ny mpianatra ao amin’ny sekolin’i Kristy. Sady misy antitra no misy tanora ny mpianatra. Ireo izay mitandrina ny torolalan’ilay mpampianatra avy any ambony dia mandroso ho amin’ny fahendrena sy fahazavan-tsaina ary fiandrianan’ny fanahy mitohy hatrany , ary avy eo izy ireo dia voaomana hiditra ao amin’ny sekoly ambony kokoa izay hitohy handroso mandritra ny mandrakizay.
Ny Fahendra Mandrakizay dia mamelatra eo anoloantsika ireo lesona lehiben’ny fiainana – leson’ny adidy sy ny fahasambarana. Sarotra hianarana mandrakariva izy ireo , saingy raha tsy misy azy ireo dia tsy afaka ny handroso marina isika . Eto amin’ity izao tontolo izao ity , eo anelanelan’ny fitsapany sy ny fankam-panahiny , no atao hahazoantsika ny toerana ho amin’ny fiaraha-monin’ny madio sy ny masina. Ireo izay manaiky ho voatelin’ny fianarana tsy dia zava-dehibe loatra ka mahatonga azy ireo hitsahatra tsy hianatra ao amin’ny sekolin’i Kristy intsony dia mihaona amin’ny fahaverezana mandrakizay.
Ao amin’ny fivavahan’i Kristy dia misy hery miasa mangina manavao sy manova ny maha-izy ny tena iray manontolo, manandratra ny olona ho ambonin’ny hevi-dratsy mampitotongana rehetra , ary mampisondrotra ny fisainana sy ny faniriana ho any amin’Andriamanitra sy ny lanitra (...). Ny fahaiza-manao rehetra , izay natolotry ny mpamorona ny zanak’olombelona dia natao hampiasaina ny voninahiny; ary ao amin’izany fampiasana izany no ahitana fampiharana madio indrindra, masina indrindra, ary sambatra indrindra. Rehefa hazonina ho amin’ny toerana mbony indrindra ny foto-kevitra ara-pivavahana , ny dingam-pandrosoana tsirairay natao amin’ny fahazoana fahalalana na amin’ny fikolokoloana ny fahaizana dia dingana mandroso ho amin’ny famolavolana ny olombelona miaraka amin’Andriamanitra, ny voafetra miarakamin’ny Tsy misy fetra.
Izay manaraka ny fitarihana avy any ambony dia nahita ny hany tena loharano marin’ny fahasoavana mamonjy sy ny tena hasambarana, ary nahazo ny hery hizarana ny hasambarana ho an’izay rehetra manodidina azy.